muscleprofessor: လက်မောင်းနောက်သားအတွက် ဂျေကတ်တလာ၏အကြံပေးချက်arial" action="like" colorscheme="light">
﻿မောင်းအားသန်﻿၍လက်﻿﻿မောင်းချည်းပဲဖိကစား﻿နေရင်﻿﻿တော့သင့်﻿အတွက်က်﻿လိုက်﻿﻿လေ﻿ဝေး﻿လေနဲ့လိုအပ်﻿ချက်﻿﻿တွေကပြည့်﻿မယ်﻿မထင်﻿﻿ပေ။ထိုအတူပင်﻿ကျွန်﻿﻿တော်﻿တို့သည်﻿လက်﻿﻿မောင်း﻿ရှေ့သားနှင့်﻿﻿နောက်﻿သား﻿လေ့ကျင့်﻿မှုတွင်﻿အများစုသည်﻿လက်﻿﻿မောင်း﻿ရှေ့သားကိုသာအာရုံစိုက်﻿ကစားတတ်﻿ကြသည်﻿။လက်﻿﻿မောင်း﻿ရှေ့သားမို့﻿မောက်﻿လုံးဝန်း﻿နေပြီးလက်﻿﻿မောင်း﻿နောက်﻿သားအားနည်း﻿နေရင်﻿သင့်﻿အတွက်﻿ Side Triceps မှာအခက်﻿﻿တွေ့နိုင်﻿ပါပြီ။﻿နောက်﻿သားဆိုတာလက်﻿﻿မောင်းအ﻿ပေါ်ပိုင်းထုရဲ့၃ပုံ၂ပုံကို﻿နေရာယူထားပါတယ်
﻿Tricepsဆိုတဲအတိုင်းလက်﻿﻿မောင်း﻿နောက်﻿သားမှာကြွက်﻿သား၃မျိုး inner -medial- outer ဆိုပြီးပါဝင်﻿ပါတယ်﻿။တစ်﻿ချို့ကလည်း﻿﻿ပြောကြတယ်﻿လက်﻿﻿မောင်း﻿နောက်﻿သားသည်﻿
တာဒွိဟဖြစ်﻿သွားနို﻿င်﻿သည်﻿။ယခု﻿ဆောင်းပါးမှာ﻿တော့ ၄ထပ်﻿ကွမ်းချန်﻿ပီယံ ﻿ဂျေကတ်﻿တလာရဲ့ လက်﻿﻿မောင်း﻿နောက်﻿သားအကြံ﻿ပေးချက်﻿တစ်﻿ချို့ကိုတင်﻿ပြ﻿ပေးလိုက်﻿ပါတယ်﻿။
ဆီ﻿ခေါ်﻿ဆောင်﻿နိုင်﻿တဲ့﻿လေ့ကျင့်﻿ခန်းတစ်﻿ခုပါ။ဥပမာ--﻿cable press down
၃။parallel bar dip ﻿လေ့ကျင့်﻿ခန်းကို﻿ကျွန်﻿﻿﻿တော့်﻿လက်﻿﻿မောင်း﻿နောက်﻿သားထုတင်﻿﻿သောအဓိက﻿လေ့ကျင့်﻿ခန်းအဖြစ်﻿﻿လေ့ကျင့်﻿ပါတယ်﻿။
ချင်းမတူညီကြပါဘူး။parallel bar ﻿လေ့ကျင့်﻿ခန်းက﻿တော့ကျွန်﻿﻿﻿တော့်﻿လက်﻿﻿မောင်း﻿နောက်﻿သားအတွက်﻿အကျိုးပြု﻿လေ့ကျင့်﻿ခန်းတစ်﻿ခုပါ။ကိုယ်﻿အ
၅။လက်﻿﻿မောင်း﻿နောက်﻿ရဲ့အတွင်းကြွက်﻿သား﻿ထုတက်﻿ဖို့﻿နောက်﻿ထပ်﻿﻿လေ့ကျင့်﻿ခန်းတစ်﻿ခုကEZ bar ဖြင့်﻿﻿လေ့ကျင့်﻿ခြင်းပါ။အ﻿ပေါ်ဆုံးအ﻿﻿ရောက်﻿တွင်﻿တံ﻿တောင်﻿ကိုဆန့်﻿လိုက်﻿ခြင်းကလက်﻿﻿မောင်း﻿နောက်﻿ကြွက်﻿
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ မောင်အိုလံပီယာပြိုင်ပွဲဝင်ဟောင်း ကီဗင်လက်ဗရွန်း၏
လက်မောင်းနောက်သားနှင့် ပတ်သက်လာလျှင် ကာယဗလတွင် ကီဗင်လက်ဗရွန်းလောက် ပိုမကောင်းနိုင်ကြပါ။ တကယ်တော့ လက်ဗရွန်းကို တခြားအစိတ်အပိုင်းများမှတဆင့် အနိုင်ယူသွားခဲ့သည်များရှိ၏။ သို့သော် သူ့လက်မောင်းနောက်သားများသည် အထူးတလည်ပင် အထင်ကြီးစရာကောင်းနေသည်။ သူ့လက်မောင်းများ၏ လုံးဝန်းသော သဏ္ဌာန်ဖြစ်ပေါ်စေပြီး သူ့most muscular ပို့စ်သည်လည်း အထူးခြားဆုံး ပြကွက်တစ်ခုဖြစ်သည်။၁၉၉၂ခုနှစ်တွင် လက်ဗရွန်းသည် ပွဲနှစ်ပွဲတည်းဖြင့် အကြီးကျယ်ဆုံး ကာယဗလမောင် စာရင်းဝင်သွားနိုင်ခဲ့သည်။ ဒုတိယနှစ်ခါရခဲ့သည်(သူ ပထမဆုံး စပြိုင်သည့် မောင်အိုလံပီယာတွင် ဒုတိယရခဲ့သည်)။ နောက်ပြီးမှသာ တတိယတစ်ခါရသည်။ကီဗင်လက်ဗရွန်းပြောသည်မှာ “လက်မောင်းနောက်သားက ကြွက်သားအားလုံးကို ထိဖို့ ကျွန်တော် ကစားနည်းမျိုးစုံ ကစားသည်။ ကျွန်တော်ကစားခဲ့တဲ့ အရာအားလုံးတိုင်း စာအုပ်တွေထဲ မပါနိုင်ပါ။ ကျွန်တော့် လေ့ကျင့်စဉ်အများစုသည် ခံစားမှုနှင့် ပင်ကိုသိစိတ်ပေါ်မှာ အခြေခံထားပါသည်။” ဟူ၍ ကျွန်တော်တို့ကို ထိထိရောက် အကြံပေးခဲ့သည်။
Fitness Program တစ်ခုဘယ်လိုရေးဆွဲမလဲ?
Fitness Famous နဲ့Fitness Success ဘယ်ဟာရွေးမလဲ?
ချန်ပီယံတို့ပြောသော ချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ အပိုင်း (၁)
သိထားသင့်သော လေ့ကျင့်ခန်းနှင့် နှလုံးခုန်နှုန်း
ဘက်လိုက်မှုများနှင့် မောင်အိုလံပီယာ သမိုင်း အပိုင်း...
ဘက်လိုက်မှုများနဲ့ မောင်အိုလံပီယာသမိုင်း( ၁)
Bollywood super star's workout
2015 Mr.olympia Tribute
တေးဂီတနှင့် ကာယလေ့ကျင့်ခန်း အပိုင်း(၁)
Certification ရော Qualification ပါလိုအပ်နေတဲ့မြန်မ...
Trainer အရွေးမှားလျင်ကောင်းစားဖို့ မရှိ နှင့် fitn...
ထင်ယောင်ထင်မှားအမျိုးသမီး fitness အလွဲများ
Myanmar fitness နယ်ပယ်မှ၊စာတွေ့ ၊လက်တွေ့ အတင်းစုံ၊...
Fitness supplement နှင့်အသက်ရှည်ခြင်း
အလေးနဲ့စက် ဘယ်ဟာပိုကောင်းသလဲ?